माग्ने सँग’क्लियर कट’- ( भिडियो वार्ता )
गफगाफ - नेपाली हास्य कलाकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो एक दशक यता केदार घिमिरे उर्फ ’माग्नेबुढा’ चर्चित नाम मध्यको एक हो । बिक्रम सम्बत् २०५८ साल बाट अभिनय यात्रामा प्रवेश गरेका घिमिरेले कुनै समयको चर्चित टेली(सिरियल ’हिजो आजका कुरा’,’गितान्जली’, ’तितोसत्य’, ’लोक लहरी’, ’जिरे खुर्सानी’ हुदै ’मेरी बास्सै’ मा प्रवेश गरेका थिए । जब ’मेरी बास्सै’ मा माग्ने बुढाको रुपमा देखिन थाले केदार घिमिरेलाई दर्शकहरुले निकै मन पराएका थिए । उक्त हास्य टेलीसिरियल को माग्ने बुढा नामक पात्रले केदार घिमिरेको कलाकारितालाई नै नयाँ आयाम दिएको थियो । कलाकारिताको १५ बर्ष भन्दा बढी समय अवधिमा ’माग्ने बुढा’ पात्रलाई नचिन्ने सायदै कमै होलान् । उनै केदार घिमिरे ’माग्ने बुढा’ पछिल्लो केहि बर्ष यता सानो पर्दाको हास्य चलचित्रमा भन्दा बढी ठुलो पर्दाको चलचित्रमा अभिनय गरिरहेका छन् । उनि अभिनित फिल्म ’रामकहानी’ प्रदर्शन भै रहेको छ, भने ’छक्का पन्जा ३’ प्रदर्शनका निम्ति दशै पर्खिरहेकोे छ । उनै केदार घिमिरे उर्फ ’माग्नेबुढा’ सँग फर्सी नेटवर्कमा ’क्लियर कट’ नामक कार्यक्रममा सुमन कार्की उर्फ ’नक्कली धमला’ ले रमाइलो कुराकानी गरेका छन् ।
तपाँई ले ’रामकहानी’ मा दश लाख लिएपछि सरकारले माग्नेहरुलाई बाटोमा माग्न नदिएको भन्छन् नि क्लियर गर्दिनुस के हो ?
यो त मैले सुनेको छैन, माग्ने ले मागी रहेका होलान् , सायद नहटाउलान् । यदी हटायो भने दुई कुरा हुन सक्छ कि त गरिबी हटाउन सक्छ, कि त गरिब हटाउन सक्छ, गरिबी हटायो भने समाधान भयो फेरी गरिबलाई हटायो भने समस्या भयो ।
तपाइँले सधै ’छ’ बाट आउने फिल्म गर्नुभएको थियो तर ’रामकहानी’मा त काहि पनि छ छैन त ?
होइन छ भनेको कि दिपक दाई कि त दिपा दिदीलाई फाप्न सक्छ त्यसैले छ नै छ भएको हो तर यता सुदर्शन जी र पुजा जी लाई छ नचाहिएको होला त्येसैले हुन सक्छ ।
तपाँईको ’रामकहानी’ ले प्रधानमन्त्रिलाई के सहयोग गर्छ ?
सहयोग गर्छ नि किन नगर्नु हाम्रो चलचित्र राम्रो चल्यो भन्यो सरकारलाई कर तिर्छ अनि त सहयोग मिलि हाल्छ नि ।
तपाईको साला कति जना हुनुहुन्छ ?
मेरो खुदका सालाहरु जम्मा ३ जना छन्, एक जना बान्द्रे भयो, अनि फिल्मको मासाला । सबै जोड्दा त्यहि ५ जना भए ।
’रामकहानी’ तपाईले नायकले भन्दा बढी पारिश्रमिक लिनु भएको हो ?
नायकले कति लिनु भयो मलाई थाहा छैन, मेरो बिषयमा त्यति धेरै चर्चा गर्नु पर्ने थिएन, दश लाख भनेर खसी काटियो, अलि अलि कहि कतै सहयोग पनि गरियो बाकी खर्च गरेर सकि सक्यो ।
’माग्ने बुढा’ टेलीचलचित्रमा फर्किने सम्भावना कति छ ?
टेलीचलचित्रमा फर्किने सम्भावना त कम नै छ,तर यस्को मत्लब नफर्किने नै भन्ने हैन । जाहाँ बाट भए पनि मेरो पहिलो उद्देश्य दर्शकलाइ मनोरञ्जन दिनु नै हो । र म त्यसमै लागी परेको छु ।